Mgbapu-free ike Shell Construction
Ọta efu enwere mkpuchi
Kemeghi na mbughari ọta
Vetikal n'iji ya gee ntị dabara usoro
Nhazi profaịlụ Lowe
EC EN1077 gbaara
Maka snow, skate na okpu agha.
Nọmba nlereanya Ski okpu agha-V01S
Ịgbatị nhọrọ Mbughari doro anya ọta, kefoogu-free ọta
Eriri Fechaa polyester
Onye na-adịghị ahụkebe, okpu agha nke skate na-arụ ọrụ ọsụ ụzọ anyị na-egbu osisi na ọ laghachiri inye ndị enyi freestyle nhọrọ dị ịtụnanya maka ịkwanye ọganihu ha ebe niile n'ugwu site na ogige ahụ ruo ọkpọkọ. Ọgwụ shei ewu pụtara okpu agha na-nzube-wuru iguzogide na nso nso mmetụta nke jibbing, ịwụ elu, hiking na njem; a bụ n'ihi ya impacting-adọrọ adọrọ EPS liner na propriety. nsonaazụ bụ nguzozi zuru oke nke nkasi obi, ịdịte aka na imepụta njedebe nke na-egbo mkpa nke ndị na-agba freestyle ugbu a kachasị ike ijikwa ikike dị elu na nke dị ala. Na mgbakwunye na teknụzụ emebere nke ọma, okpu igwe na-enye ọcha, na-apụta ìhè ma na-adọrọ adọrọ ma nwee ọfụma yana sistemụ nwere ike iwepụ.
Nnukwu ihe ike siri ike na-echebe okpu agha site na mbibi ma ọ bụ okwute, site na iji engineer ABS plastic nke dị na ngwongwo siri ike, anyị na-eji nchekwa dị elu mgbe niile nchekwa. EPS EPS site na usoro nhazi dị elu na-enye ọkwa dị nfe mana ọ siri ike maka nchedo isi. Iji nye ike dabara adaba n'etiti EPS na shei siri ike, anyị mepụtara ọwa geometry mputa nke EPS liner, na-eme ezigbo okpu agha na-ezukọta site na imepụta yana yana ogo dị mma, ọwa ndị dị n'èzí na-enyere ikuku aka na ume jụrụ maka ọrụ ndị ọzọ.
A na-eji okpu mkpuchi dị elu nwere mpempe ntị dị elu, naịlị nịịlị dị n'ime ime na-enye aka dị nro na anụ ahụ ma kpoo ihu gị ihu na ọnọdụ oyi, anyị mekwara ka mpụta mpịakọta mpụta nke mpempe ntị ma jikọta ya na akwa mma. teknụzụ, anyị nyekwara nhọrọ ahaziri iche nke mpempe ntị dị iche iche (dịka, akpụkpọ anụ, akwa akwa na akwa suede) na mpempe mpempe mputa (dịka ọtụtụ njikọta mbadamba, pịa ọkụ na akwa TPU) nke na-eme ezigbo mma ma mee ka ị nwee ọ enjoyụ sista ahụ.
Nnukwu mkpuchi mkpuchi nkasi obi na ihe nkedo sistemụ na-eweta mmetụta dị mma na nchedo isi kpamkpam. Anyị na-ahazi vetikal atụgharị kwesịrị ekwesị usoro na n'ji nwere ike ịgbanwe ihe kwesịrị ekwesị na otu aka rubberized alkpọ oku, ihe ndozi enye atọ vetikal ọnọdụ na n'ji nwere ike họrọ ihe kasị mma kwesịrị ekwesị usoro ọnọdụ zuru okè kwesịrị ekwesị, na bụ nnọọ adaba n'ihi na ị.
Nke gara aga: Freki Ski na snowboard okpu agha V10ski
Osote: Okpu agha Ski na umuaka V01Kid
Okpu-agha Bluetooth Snowboard
Low Profaịlụ Snowboard Helmet
Spy Snow okpu agha